Qar-iska-tuurka Kenya oo KACDOON shacbi ka dhalan karo! | Hadalsame Media
”Kuma jiraan xiriirka labada dal” – Kenya oo sheegtay inaysan DF…
Home Maqaallada Qar-iska-tuurka Kenya oo KACDOON shacbi ka dhalan karo!
Qar-iska-tuurka Kenya oo KACDOON shacbi ka dhalan karo!
(Hadalsame) 21 Sebt 2019 – Muddo dheer oo uu jiray loollan baddeed oo gaadhay maxkamadda aduunka iyo weliba golayaasha fadhiyada waddamada caalamka intooda badan, waxaa hadda aad mooddaa In hawshii oo dhammi soo idlaatay, iyadoo ay go’aan qaadashada maxakamaddu ka hadhsantahay muddo kooban.
Previous articleAkhri 5-ta marxaladood ee XUUB-SIIBADKA qabyaaladeed ee SIYAASIGA & halka uu ugu dambayntii ku furo!
Next articleCALI QARAN: Maxaad ka taqaanaa maleeshiyada la dagaalanta Shabaabka?
”Kuma jiraan xiriirka labada dal” – Kenya oo sheegtay inaysan DF Somalia aysan iyaga kala hadli karin ciidanka ka jooga Somalia
(Nairobi) 28 Jan 2021 - Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidanka Somalia ka jooga ay hoos tagaan taliska AMISOM sidaa darteed aanay kasoo baxaynin...